အမျိုးသားများအတွက် Luxury Classic Slim Fit အမျိုးသားများအတွက်မင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီနှင့်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်မရှိ | WoopShop®
အမျိုးသားများအတွက်ဇိမ်ခံဂန္ထဝင်ပါးလွှာသောအမျိုးသားများအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံဂျာကင်အင်္ကျီနှင့် Pant & Tie Suits
$68.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $118.99
အရွယ် XS S M L XL XXL XXXL 4XL
အရောင် အနက်ရောင် 1 အနက်ရောင်21 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် 1 အနက်ရောင်2အနက်ရောင် 1 အပြာ2အပြာ 1 ရေတပ်အပြာ2ရေတပ်အပြာ 1 fuchsia2fuchsia 1 ခရမ်းရောင်
XS / 1 တောက်ပအနက်ရောင် S / 1 တောက်ပအနက်ရောင် အနက်ရောင် M / 1 တောက်ပသည် အနက်ရောင်တောက်ပ L / 1 XL / 1 တောက်ပအနက်ရောင် XXL / 1 တောက်ပအနက်ရောင် XXXL / 1 တောက်ပသောအနက်ရောင် အနက်ရောင် 4XL / 1 XS /2တောက်ပအနက်ရောင် S /2တောက်ပအနက်ရောင် အနက်ရောင် M /2တောက်ပသည် အနက်ရောင်တောက်ပ L /2XL /2တောက်ပအနက်ရောင် XXL /2တောက်ပအနက်ရောင် XXXL /2တောက်ပသောအနက်ရောင် အနက်ရောင် 4XL /2XS / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် S / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် M / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် L / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် XL / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် XXL / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် XXXL / 1 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် 4XL / 1 မှောင်မိုက်သောမီးခိုးရောင် XS /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် S /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် M /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် L /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် XL /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် XXL /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် XXXL /2မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင် 4XL /2မှောင်မိုက်သောမီးခိုးရောင် XS / 1 အနက်ရောင် S / 1 အနက်ရောင် အနက်ရောင် M / 1 အနက်ရောင် L / 1 XL / 1 အနက်ရောင် XXL / 1 အနက်ရောင် XXXL / 1 အနက်ရောင် 4XL / 1 အနက်ရောင် XS /2အနက်ရောင် S /2အနက်ရောင် အနက်ရောင် M /2အနက်ရောင် L /2XL /2အနက်ရောင် XXL /2အနက်ရောင် XXXL /2အနက်ရောင် 4XL /2အနက်ရောင် XS / 1 အပြာ S / 1 အပြာ M / 1 အပြာ L / 1 အပြာ XL / 1 အပြာ XXL / 1 အပြာ XXXL / 1 အပြာ 4XL / 1 အပြာ XS /2အပြာ S /2အပြာ M /2အပြာ L /2အပြာ XL /2အပြာ XXL /2အပြာ XXXL /2အပြာ 4XL /2အပြာ XS / 1 ရေတပ်အပြာ S / 1 ရေတပ်အပြာ M / 1 ရေတပ်အပြာ L / 1 ရေတပ်အပြာ XL / 1 ရေတပ်အပြာ XXL / 1 ရေတပ်အပြာ XXXL / 1 ရေတပ်အပြာ 4XL / 1 ရေတပ်အပြာ XS /2ရေတပ်အပြာ S /2ရေတပ်အပြာ M /2ရေတပ်အပြာ L /2ရေတပ်အပြာ XL /2ရေတပ်အပြာ XXL /2ရေတပ်အပြာ XXXL /2ရေတပ်အပြာ 4XL /2ရေတပ်အပြာ XS / 1 fuchsia S / 1 fuchsia M / 1 fuchsia L / 1 fuchsia XL / 1 fuchsia XXL / 1 fuchsia XXXL / 1 fuchsia 4XL / 1 fuchsia XS /2fuchsia S /2fuchsia M /2fuchsia L /2fuchsia XL /2fuchsia XXL /2fuchsia XXXL /2fuchsia 4XL /2fuchsia XS / 1 ခရမ်းရောင် S / 1 ခရမ်းရောင် M / 1 ခရမ်းရောင်
အမျိုးသားများအတွက်ဇိမ်ခံဂန္ထဝင်ပါးလွှာသောအမျိုးသားဝတ်စုံဝတ်စုံဂျာကင်အင်္ကျီနှင့် Pant & Tie Suits - XS / 1 bright black backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အမျိုးအစား: ဝတ်စုံ
ပစ္စည်း: polyester, ထဲမှာပါတဲ့
ဘောင်းဘီပိတ်အမျိုးအစား: ဇစ် Fly
ပစ္စည်း: 70% polyester + 30% viscose / 75% polyester + 25% viscose
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း - Standard
မော်ဒယ်နံပါတ်: အမျိုးသားများအတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီ + pant + လည်စည်းဝတ်စုံ
အရောင်: အနက်ရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်၊ ရေတပ်အပြာ၊ Fuchsia, Violet၊ နှင်းဆီနီ
Size: က S-4XL (တဦးတည်းခလုတ်ကို), XS-3XL (နှစ်ခုခလုတ်)
ရာသီ: ဆောင်းဦးရာသီ, နွေဦး, ဆောင်းရာသီ
ဗားရှင်းအမျိုးအစား: slim မထိုက်မတန်
အနွေးထည် ကိုယ်ခန္ဓာအရှည် ပခုံး သေတ္တာ အင်္ကျီလက် ဝမ်း
cm လက်မ cm လက်မ cm လက်မ cm လက်မ cm လက်မ
ဘောင်းဘီ ခါး တင်ပါး ဘောင်းဘီအရှည် ပေါင်
cm လက်မ cm လက်မ cm လက်မ cm လက်မ
မှတ်ချက်။ ။ ဇယားတွင်ကိုယ်ထည်အရွယ်အစားမဟုတ်ဘဲအဝတ်အစားအရွယ်အစားကိုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တိုင်းတာသည့်အရွယ်အစားသည်တစ်ခါတစ်ရံအမှားအယွင်းများရှိသည်၊ သို့သော်အမြဲတမ်း 1-3cm အတွင်း၌
ငါဒီဝတ်စုံကိုမှာယူတဲ့အခါမှာဒါဟာလောင်းကစားပဲ, ငါကရသောအခါအလွန်ကြီးသောအရည်အသွေးကြီးနှင့်အရွယ်အစားပြီးပြည့်စုံသောပြောတယ်! ဘောင်းဘီတွေက elastic ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးသည်ကြီးလှ၏။ ငါပေးရတာထက်ပိုပြီးရတယ်စျေးနှုန်း တစ် ဦး လည်စည်းပျောက်ဆုံးနေပေမယ့်ပြanနာမဟုတ်, စတိုးဆိုင်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအလွန်ကြီးစွာသော! အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်